China 3D embossed izinkuni ipulasitiki esiyinhlanganisela WPC odongeni ambozwe abakhiqizi nabaphakeli | U-Lihua
I-3D embossed woodproof plastic plastic composite WPC wall cladding
Ubunikazi bemikhiqizo:WPC Wall khazi
Intengo:$ 1.58 / M
I-3D WPC Wall Cladding
I-2.2m, 2.9m, 3.6mor eyenziwe ngezifiso
Villa, cottage house
1: Ubuchwepheshe obusha be-3D embossing WPC yokuhlobisa ngaphandle, ukuhlobisa okuhlobisa. Ubuchwepheshe be-embossing be-3D kuyindlela yokukha phezulu. Ukugqokiswa ngakunye kuyefana nesithombe esibaziweyo, futhi isimo sobuciko nezinga lokubuka sithuthukiswe kakhulu. I-Classical 3D embossing ingukuthuthuka okuhle ekubekweni kwamapulangwe okhuni-okubonwayo, okungeke kuqoshwe kabusha ngamabhande kepha futhi kusekele umkhondo wokukhonkotha kokuqala.
2: Traditional wpc ambozwe esiyinhlanganisela kulula ukulahlekelwa okusanhlamvu ebusweni, super embossed khazi ukwenza kangcono kakhulu kunanoma iyiphi ukhuni ezivamile esiyinhlanganisela, kuba zemvelo futhi ekhangayo, kungcono fading futhi ukunwaya ukumelana.
3: super embossed WPC ambozwe uLihua zonke izinzuzo bendabuko esiyinhlanganisela odongeni iphaneli, namanje kugcinwa: manzi, anti-UV, sezulu ukumelana, anti-ukugqwala, ukuvimbela izinambuzane, ukugcinwa ongaphakeme, impilo inkonzo ende njll ... amabhodi e-embossed ajulile abukeka futhi azwakale njengokhuni lwemvelo ngenxa yokwelashwa kwe-3D embossing ebusweni.
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.1 Akukho nokukodwa kokuqagelwa okufanele kwehluleke Akukho ukuqhekeka kwezinhlobo zokuhlola
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.2 Ukweqa ngaphansi komthwalo ka-500N -5.0mmUkugoba amandlaUmthwalo omkhulu ngesikhathi sokuphuka Ubuso Bangaphambili: Umthwalo omkhulu: Kusho 1906Ukucaciswa ku-250N: Kusho u-0.64mm
Ukuvuvukala okukhulu: ≤12% ubukhulu, thickness2% ububanzi, ≤1.2% ubude ukumuncwa kwamanzi:
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.6 Phoqelela ukwehluleka: 479N, Inani elisho: 479N,
Langaphambilini I-3D Deep Embossed Waterproof composite WPC Decking Hollow
Olandelayo: Outdoor manzi 130x10mm ukhuni plastic esiyinhlanganisela WPC odongeni ambozwe
Q1: Ingabe imikhiqizo yakho ye-WPC ingaba nelogo yekhasimende?
A: Yebo, uma ikhasimende lisinika uphawu lwalo, singabeka ilogo kumaphakeji wemikhiqizo noma siyiphrinte kwimikhiqizo ekhethekile!
Q2: Koze kube nini usenza isikhunta esisha semikhiqizo emisha?
A: Ngokuvamile, sidinga izinsuku eziyi-15-21 ukwenza isikhunta esisha, uma kukhona umehluko, izinsuku ezingu-5-7 ngaphezulu zidinga ukwenza ukulungiswa okuncane.
Q3: Ngabe ikhasimende lidinga ukukhokha imali yesikhunta esisha? Yimalini? Sizobuyisa le mali? Kuzoba isikhathi esingakanani?
A: Uma ikhasimende lidinga ukwenza isikhunta esisha, yebo badinga ukukhokha imali yesikhunta kuqala, kuzoba ngama- $ 2300- $ 2800. Futhi sizobuyisa le mali lapho ikhasimende lifaka ama-oda amathathu esitsha se-20GP.
I-Q4: Yini ingxenye yemikhiqizo yakho ye-WPC?
A: Ingxenye yethu yemikhiqizo ye-WPC ingama-30% HDPE + 60% Wood Fibers + 10% Chemical Additives.
I-Q5: Ubuyekeza imikhiqizo yakho isikhathi esingakanani?
A: Sizobuyekeza imikhiqizo yethu njalo ngenyanga.
Q6: Uyini umgomo wokuklama wokubukeka komkhiqizo wakho? Ziyini izinzuzo?
A: Imikhiqizo yethu idizayini ekusebenzeni kwempilo, njenge-anti-slip, ukumelana nesimo sezulu, i-anti-fading, njll.
Q7: Uyini umehluko wemikhiqizo yakho phakathi kontanga?
A: Imikhiqizo yethu ye-WPC isebenzisa izinto ezingcono nezintsha, ngakho-ke ikhwalithi ingcono nokusizakala kobuchwepheshe, intengo yethu mihle kakhulu.
I-Q8: Bangobani abasebenzi bakho be-R & D? Yiziphi iziqu?
IMP: Sineqembu le-R & D, bonke banolwazi olugcwele ngokwesilinganiso, basebenze kule ndawo iminyaka engaphezu kweyishumi!
Q9: Uyini umqondo wakho we-R & D yomkhiqizo?
A: Umqondo wethu we-R & D ungokwemvelo, ukugcinwa okuphansi, ukusebenzisa impilo ende nekhwalithi ephezulu.
Q10: Yiziphi izincazelo zobuchwepheshe zemikhiqizo yakho? Uma kunjalo, yiziphi eziqondile?
A: Ukucaciswa kwethu kwezobuchwepheshe kungusayizi oqondile, impahla yomshini, ukusebenza kwe-Anti-slip, ukusebenza okungangenwa ngamanzi, ikhono lesimo sezulu, njll.
Embossed WPC Wall khazi
I-Co-Extruded WPC Wall Cladding
Ukuhlanganiswa kodonga oluyinhlanganisela ye-WPC
Ukugqokelwa kodonga kwe-WPC
Iphinda isebenze ngokuphelele i-Super Embossed WPC Wall Panel
Ukufiphala Nokunwaya Ukumelana Okusanhlamvu Okusanhlamvu ...
Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, WPC phansi, ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC decking phansi, WPC decking esiyinhlanganisela, WPC decking ongaphandle,